Fortnite na-arụ ọrụ egwu-egwu n'etiti PlayStation 4 na Xbox One maka oge mbụ | Akụkọ akụrụngwa
Fortnite na-arụ ọrụ egwu-egwu n'etiti PlayStation 4 na Xbox One maka oge mbụ
Agbanyeghị Microsoft gbatịpụrụ ogologo oge gara aga, Sony mere ka o doo anya na ọ nweghị mmasị na ime ka egwuregwu ịntanetị gafere. Logzọ ezi uche dị na ya na-atụle ọnọdụ kachasị nke ụlọ ọrụ Japan na ahịa egwuregwu vidiyo. Ma ihe niile agbanweela taa Fortnite bụ egwuregwu mbụ nke kwere ka usoro a chọrọ nke ukwuu, o yikwara ka ọ dị onye ọ bụla achọpụtabeghị.
Ma ọ dịkarịa ala, nkọwa mbụ na-amalite imeju ebe at, na ihe niile na-egosi na obe-ikpo okwu gaminggba Cha Cha ka rutere na consoles.
Olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ Reddit Ọ bụ akwu ajụjụ, o doro anya na ọ na-azọrọ na achọtala onye ọrụ na Fortnite nwere aha otutu nke agaghị ekwe omume iji site na PlayStation Network mana enwere ike iji ya n'ime Xbox Live. N'ezie, iji lelee ya, ọ gara Xbox One wee chọọ onye ọrụ, onye, ​​olee otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, achọtara. Mana nke a abughi nyocha doro anya, ihe doro anya bụ nna na nwa ya nwoke na-egwu Fortnite otu na Xbox na nke ọzọ na PS4, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na foto a dị oke mma, anyị nwere ike ịghọta na ọ bụ.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ikwenye na onye nrụpụta Fortnite emezuola nrọ nke ọtụtụ ndị ọrụ site na ịkekọrịta ọchị n'etiti nyiwe abụọ ahụ. Anyị na-ahapụrụ gị njikọ ahụ ka ị wee hụ foto egwuregwu ahụ HERE. Na nkenke, nke a adịghị ka ewu ewu, anyị nwere ike ịsị na ọ nweghị ihe ga-eme ọzọ, ebe Microsoft na Sony enweghị nkwupụta ọ bụla gbasara ihe merenụ, yabụ ọ nwere ike bụrụrịrị nnwale nke ụlọ ọrụ onye nrụpụta egwuregwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Fortnite na-arụ ọrụ egwu-egwu n'etiti PlayStation 4 na Xbox One maka oge mbụ
Samsung ama ohere deactivating button raara nye Bixby
Nke a bụ ọnụahịa nke Porsche Mission E, ụgbọ ala egwuregwu eletriki ya